Waxaa maalmihii tegay dhegahayaga ku soo dhacayay “Danyarta reer Puntland oo ka qaylinayaa Sicir-barar ku habsaday oo saamayay noloshoodii dadka dany [more]
Xaggee ku danbeeyey heshiisyadii qaybsiga Khayraadka dalka Soomaaliya?
Waxaa dhowaan la soo afmeeray baaritaan shidaal oo muddo ay dalka Somaliya ka waddey gaar ahaan degaamada xeebaha ah Shirkad lagu magacaab [more]
Maxaad ka taqaan Todobada wadan ee Caalamka ugu qanisan?
Wadamada ugu hodansan Caalamka, gaar ahaan Todobada dal ee ugu qanisan dunida maanta ayaa dadka wadamadaasi ku dhaqan waxaa qofkii celce [more]
Boobkii dhulka Dawladda ee Gaas xariga ka jaray oo dhaliyay xaalad cakiran!
Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland ayaa waxaa in muddo ah ka jiray boobka dhulkii loo asteeyay Dawladda Puntland, dhulkan ayaa gaaraya ilaa 15 [more]
WQ: Abdirisaaq Macalin
Hawada Dalka Soomaaliya, Dhaqaalaha iyo tirada Diyaaradaha‏ Sida aan ogsoonahey, warar ay masuuliyiin UN-ta ah sheegaan inta badan ayaa waxa ay ku yiraahdaan hawada Soomaaliya waxaa maalinkii dulmara ama [more]
Maxaa sababay sicirka Shidaalka Puntland ee cirka isku shareeray?
Gobolada Puntland ayaa waxa laga dareemayaa sare u kac xoog leh oo ku yimi sicirka Shidaalka, ka dib markii ay dad Ganacsato ah bilaabeen inay Shidaalka Pu [more]
Maxaa Dekedda Bosaaso Suuqa madow looga iibsaday?‏ Waxaa dadku dhamaan ka wada ogyahay inuu jiray Mashruuc weyn oo Imaaraadku ku balanqaaday inuu ku dhisayo Dekedda magaalada Bosaaso, waxaanu s [more]
Xog: Suuqayada Maciishada ee Puntland oo la soo gelinayo lacago Faalso ah! Lacago faalsa ah oo muddooyinkii u dambeeyay lagu daabacayay magaalada Bosaaso ayaa adkaatay in si sharci ah loo fasaxo, ka dib markii ay si weyn ug [more]
Muxuu yahay Ajandaha qarsoon ee Safarka Gaas ku tegay gobolka Bari?
Taarikhda markey ahayd 21st May, ayaa Safar aan horey loo shaacin Dr. Gas Madaxweynaha Puntland kaga ambabaxey Caasimada Puntland ee Garowe. [more]
Xukuumada Dr. Gaas oo ku fashilantay qorshihii Bangiga Aduunku ku taageeri lahaa Puntland!
Bangiga Aduunka oo horay Dawlada Puntland uga balan qaaday inuu ku taageerayo Maaliyadeed oo xoog leh lagu taageerayo Miisaaniyada dhaqaala ee Dawlad [more]